Dhageyso Warbixin: Musharraxiinta Ugu Cadcad Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya – Saraar Media
Home›All War›Dhageyso Warbixin: Musharraxiinta Ugu Cadcad Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya
Last Updated on December 23rd, 2016 at 05:27 pm
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu waday in la qabto maalinta Arbacada ah ee soo socota ayaa la filayaa in mar kale dib loo dhigo ilaa waqti dambe oo aan weli la shaacin.
Xaga hoose ka dhageyso Warbixintan:
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen khilaafaadyo cusub oo ku saabsan xubnaha Aqalka Hoose ee Baarlamaanka ee matalaya beelaha Waqooyi iyo khilaaf labaad oo ku saabsan sida laga yeelayo kuraasta la sheegay in la musuqmaasuqay.
Balse dhinaca kale waxaa socda ololaha musharraxiinta madaxweynaha oo billaabay inay kulamo gooni-gooni ah la yeeshaan xubnaha aqalka baarlamaanka.
Haddaba waa kuwee musharraxiinta madaxweynenimo ee ugu cadcad doorashadan. Warbixintan gaarka ah waxaa Muqdishu nooga soo diray Jacfar Kuukaay.
Golaha wasiirada Soomaaliland oo ansixiyey miisaaniyadda Sanadka ...
Daawo: Ciyaaraha Gobolada Somaliland oo la Shaaciyey Wakhtiga ay Bilaabmayaan